Vonoan’olona tamin’ny fomba feno habibiana – Ilakaka : karan-doha sisa, tsy teo intsony ny atidohan’ilay saofera | NewsMada
Vonoan’olona tamin’ny fomba feno habibiana – Ilakaka : karan-doha sisa, tsy teo intsony ny atidohan’ilay saofera
Nohanin’ny alika sa nesorin’ireo namono azy mihitsy ? Asa, fa ny karan-dohany sisa tazana, tsy tao intsony ny ati-dohany. Teo amoron’ny lalam-pirenena faha-7, tany Ilakaka no nahitana fatin’ity lehilahy saofera, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tokoa.
Karan-doha sisa, tsy nisy taolan-tenda intsony… izay no faty hitan’ny olona tany Ilakaka, tany amin’ny fokontany Manombobe, tsy lavitra ny restaurant Tailandey, ny alarobia teo. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ilay lehilahy hita faty io. Efa karana sisa ny lohany, izay voalaza fa nisy nanala tao ny atidohany.
Tonga teny an-toerana ny zandary sy ny fokonolona ary ny dokotera nizaha ity razana ity. Fanatra fa novonoina tany amin’ny toerana hafa ity olona ity, ary nariana teny amin’io nahitana azy io ny fatiny. Nisy nahalala ihany izy izy io ka voalaza fa olona namonjy asa hanao saofera any Ilakaka ny antodian’ilay lehilahy io. Olona avy any Ambovombe Androy izy io.
Milaza ny olona any an-toerana fa tsy mbola nisehoana famonoan’olona tamin’ny fomba feno habibiana toy izao. “Miseholany ny tsy fandriampahalemana aty aminay. Izao indray misy ny vonoan’olona mahatsiravina”, hoy ny mponina. Nampiely ny feo ny amin’ny fisiana halatra taova noho ny fahenoan’ny olona fa tsy nisy atidoha intsony ilay razana. Efa mandray an-tanana ny fanadihadiana ny zandary any Ilakaka manoloana ity vonoan’olona ity. Raha ny vaovao voaray, tsy mbola nisy aloha ny olona ahiahina momba ity tranga ity. Efa anatin’ny famotorana tanteraka ny mpitandro filaminana.
Lehilahy nisy namono tany Morarano
Ankoatra ity tany Ilakaka ity, fatin-dehilahy iray koa no hitan’ny olona, tany Morarano Maevatanàna ny talata lasa teo. Nampilaza ny zandary ny fokonolona fa misy fatin-dehilahy hita any an-toerana. Tsy fantatra na avy aiza na iza ity lehilahy maty ity, tsy nisy taratasy nahafantarana ny momba azy. Nidina tany amin’ny toerana voatondro ny zandary sy ny dokotera nijery ny zava-misy. Araka ny fizahana, maty nisy namono ity lehilahy ity ary nahitana ratra ny tarehiny. Mandeha ny famotorana momba ity vonoan’olona ity.
Santionany amin’ny endriky ny tsy fandriampahalemana eto amintsika ihany ireto tany Ilakaka sy Maevatanàna ireto. Mandry tsy lavo loha ny olona, kanefa ankoatra izany, miaina anaty krizy ihany koa ka tsy mahagaga raha mirongatra ny karazana haratsiana rehetra.